HS:- Dowlada Soomaaliya oo looga maarmi wayeymaamul u sameynta Jubooyinka kadib..
Posted by admin on March 10 2013 17:14:44
HS:- Dowlada Soomaaliya oo looga maarmi waayey maamul u sameyntii Jubooyinka kadib markii ay dalka Kenya ka dhaceen isbedelo siyaasadeed aan caadi aheyn.Warbixin dheer.
HS:-Dalka Kenya waxaa ka dhacay isbedel siyaasadeed ay xaqiiqadiisa qiyaasi karaan dad yar oo si hoose ula socda siyaasadahii guracnaa ee lala doonayey gobolka Jubada Hoose. doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Kenya ayaa waxaa awoodii ay ku lahaayeen siyaasada dalkaas ku waayey siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda beesha Ogaadeen iyo musharaxii lagula heshiisayay in Jubooyinka lagu dari doono Kenya Roilla Odinga.
Waxaa doorashadaas ka naxay sida warar xaqiiqada u dhaw lagu helayo beesha Ogaadeen oo ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan ku tiirsanaa wasiirkii hore ee difaaca Yusuf Haaji oo hada si dirqi ah ku noqday Sanadka Gaarisa. Waxaa gabi ahaan meesha ka baxay Faarax Macali oo ay gacanta ugu jireen mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya.
Waxaa dalka Kenya hada madaxweyne ka ah nin da yar oo sida lagu soo waramayo aan wax badan ka weyneyn madaxweynaha Soomaaliya oo waliba doonaya inuu soo nooleeyo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya isagoona qorsheynaya inuu ciidamada Kenya ka soo saaro gudaha dalka Soomaaliya.
Hambalyada degdega ah ee ay dowlada Soomaaliya u dirtay madaxweynaha cusub aad ayaa loogu baahnaa waxeyna aheyd mid waqtigeeda ku soo aaday waayo Roilla Odinga waxuu Qatar ku ahaa jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliya iyo dhulka Jubooyinka.
Inta badan beesha Ogaadeen ayaa hada waxaa ka dhax taagan is qabqabsi ku aadan guuldarada ku habsatay siyaasadooda dalka Kenya kadib markii uu gursigiisa waayey Faarax Macalin Dawaari oo isagu ahaa maskaxdii ka danbeysay in ciidamada Kenya gudaha Soomaaliya galaan horeyna idaacadaha dalka Kenya ugu sheegay in aan Kismaayo mardanbe laga xakumi doonin Kulbiyoow.
Inkasta oo laga yaabo in uu qoraalkaan dhibo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed siiba beelaha Ogaadeen iyo Majeerteen hadane wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in hada ay Jabhada Raaskaambooni ogolaatay in maamulka Jubooyinka loo daayo dowlada Soomaaliya dhismahiisa iyo talo ka bixintiisa intuba walow aan idaacadaha laga sheegin arintaan.
La soco wararkeena danbe iyo arimaha siyaasada Soomaaliya iyo Kenya